Caffee Oromiyaatti, Dura Taa’aan Koree Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Kab. Dr. Dalasaa Bulchaan kan durfamu garichi Magaalaa Dadaritti raawwii piroojektoota adda addaa daawwachuun qaamolee hawaasaa magaalichaa waliin marii gaggeesse.
Marii taasifameen, harkifannaa ijaarsa piroojektii bishaan dhugaatiifi Magaalli Dadar daandii aspaaltii dhabuun rakkoo hawaasni kaasu ta’uusaa hubachuun gareen Koreewwan Dhaabbii kun dhimmi piroojeektii ijaarsa bishaanii xumuursiisuuf biiroo bishaanii waliin qindoominaan kan hojjetamu ta'uufi aspaaltiin walqabatee qaama dhimmi ilaaluuf dabarsuun furmaanni akka kennamuuf ni hojjenna kan jedhan dursaan garichaa Dr. Dalasaan ibsaniiru.
Magaalli Qobboo rifoormii magaalaa gaafachaa jirtuun deebii hatattamaa kan barbaaddu ta'uu bulchaan Aanaa Dadar Obbo Mohaammad Ramadaan dubbataniru. Hawaasni aanichaas fedhii misoomaaf qabuun rakkoo daandii aspaaltii aanichaa hiikuuf hirmaannaa irraa eegamu taasisuuf qophii ta’uu ibsuun, mootummaan dhimma deeggarsa dabalataa akka taasisuuf gaafataniiru.
Dhimmi, kenniinsa tajaajila haqaa, qulqullina magaalaa, magariisummaa magaalaa, hojii dhabdummaa, ciccita ibsaafi qaala'iinsa jireenyaa hawaasni kaase irratti irratti yaada kan kennan Kantiibaan Magaalichaa Obbo Maammoo Soorii gaaffileen kunniin kan uummata keenya qoraa jiran waan ta'eef hanga humni magaalichaa danda'etti rakkinicha furuuf karoorfannee hojjechaa jirra jedhan.
Itti fufuunis, garichi buufata buqqaatotaafi sirreeffamtoota seeraa mana sirreessaa magaalichaa daawwachuun jajjabeessee jira.
Walumaagalatti, Gareen Koreewwan Dhaabbii Caffee Oromiyaa turtii godinicha keessatti taasiseen bu'aa marii hawaasaafi daawwannaa qaamaa irraa argame hooggansa Godinaatiif boru duubdeebii kennuun ni goolaba
Toorbee kana 6104
Ji'a kana 84356
2008 irraa eggalee 5571632